၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခြင်း
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနားကို Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့် ကာလ ဖြစ်ပါသဖြင့် Online အခမ်းအနားပုံစံဖြင့် ကျင်းပခဲ့ရာ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ Zoom Application ဖြင့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါ်နိုင်သက်ဦး နှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်အောင် တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနားအား နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီ တွင် စတင်ပြီး အစီအစဉ် (၆) ခုဖြင့် ကျင်းပခဲ့ ရာ နံနက် (၁၁:၄၅) နာရီတွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
Holding Online Virtual Courses of International Accounting Standards
With the aim to support Myanmar Public Financial Management Reform and conducting to be in line with international standards for the preparation and reporting the financial statements of government entities including state-owned economic enterprises, the Office of the Auditor General of the Union(OAG) had arranged to hold the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS) Trainings in OAG, Nay Pyi Taw since late 2019, and the first day of IPSAS Basic-Level training was held on 29.2.2020.
Holding Presentation Session regarding the Action Plan according to the SAI Performance Measurement Framework (PMF) Assessment results
The SAI PMF Assessment was conducted with the assistance of the Office of the Auditor General of Norway. When conducting the assessment, the activities of the Office of the Auditor General of the Union were measured in line with the criteria which include the indicators from SAI-1 to SAI-25. Presentation Session regarding the Action Plan according to the SAI PMF Assessment results was held on June 19, 2020 at 10:00 am at the Assembly Hall, Office of the Auditor General of the Union.
ASEANSAI Video Conference
Due to the COVID-19 pandemic around the globe, the ASEANSAI Video Conference concerning ASEANSAI Calendar 2020 was organized by the ASEANSAI Secretariat and attended by 28 representatives from six ASEANSAI member countries at 8:30 am on 12th June, 2020. At the conference, Mr. Tuan Haji Khalid Khan bin Abdullah Khan, Deputy Auditor General of Performance Audit Department from SAI Malaysia, delivered the opening speech and the conference was held with six activities of the agenda.
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးရှိ ရုံးစာကြည့်တိုက်အား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်း ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်၊ စာဖတ်ခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အတွေးအခေါ် အယူအဆများ မြင့်မားတိုးတက်စေရန် နှင့် စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများအား တတ်ကျွမ်းနားလည်ကြစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စာကြည့်တိုက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၀) ကို ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်ရှိ စုပေါင်းခန်းမ၌ ၂၂-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်းစာမူရှင်များကို စာအုပ်နှင့်အမှတ်တရတံဆိပ် ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်းစာမူပေးပို့ကြသော စာမူရှင်များအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်နှင့် အမှတ်တရတံဆိပ်အား မေတ္တာလက်ဆောင် ပေးပို့ပေးပါမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။